အမျိူးသားတွေ ဝင်ခွင့်မရှိဘဲ အမျိုး သမီးတွေပဲကြီးစိုးတဲ့ရွာ Umoja - For her Myanmar
အမျိူးသားတွေ ဝင်ခွင့်မရှိဘဲ အမျိုး သမီးတွေပဲကြီးစိုးတဲ့ရွာ Umoja
ဒီမှာလည်း အဲဒီလို ရွာလေးတွေရှိရင် အကောင်းသား…
အခုတလော အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေကို မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာစရာပါပဲ။ တကယ်တော့ဒီပြဿနာဟာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းသာ မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံအများစုက လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ပြဿနာပါ။
ကင်ညာနိုင်ငံမှာဆိုလည်း လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို ဦးတည်နေတဲ့ ရိုးရာအယူအဆတချို့ နဲ့ ဖိုဝါဒီ အားကောင်းမှုကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ ပြဿနာသိပ်ကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Samburu လို နေရာမျိုးပေါ့။
ဒါကြောင့် Samburu က အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီပြသာနာကို သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မိန်းမတွေပဲ သီးသန့်နေထိုင်အုပ်ချုပ်နေထိုင်ပြီး ယောက်ျားတွေ အဝင်မခံတဲ့ ရွာငယ်လေးကို တည်ထောင်လိုက်ခြင်းပါပဲ။
ဒီထူးခြားတဲ့ ရွာလေးနာမည်က Umoja လို့ ခေါ်ပြီး Samburu စီရင်စု၊ ကင်ညာမှာရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာအမျိုးသားတွေမရှိဘဲ ဘယ်လိုနေထိုင်မှာလဲ ဒီမိန်းမတွေကကော အိမ်ထောင်မပြု တော့ဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေပေါ်လာကြပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ဆိုရင်တော့ ရွာလေးပေါ်ပေါက်လာပုံကနေ စပြောရပါလိမ့်မယ်။
၁၉၉၀ကာလတွေမှာ အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေ မုဒိန်းကျင့်တာ ခံရတဲ့ ကင်ညာအမျိုးသမီးအရေအတွက်က ထောင်နဲ့ချီ ရှိပါတယ်။ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ မုဒိန်းမှုကို တရားရုံးမှာ တိုင်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားမျှတမှုကို မရရှိခဲ့ပါဘူး။ မုဒိန်းကျင့်ခံရတာဟာ မိသားစုကို အရှက်ရစေတယ်ဆိုပြီး လင်သားတွေရဲ့ နှိပ်စက်ရိုက်နှက်တာ၊ စွန့်ပစ်တာကို သာ ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် Rebecca Lulusoli နဲ့ တခြား victimအမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီရွာလေးကို ဝိုင်းဝန်းတည်ကြဖို့ အကြံရလာခဲ့ပါတယ်။ Rebecca ဟာ လိင်အကြမ်းဖက်မှုကို ထုတ်ပြောမိလို့ လူတစ်စုရဲ့ ရက်ရက်စက်စက်ရိုက်တာခံရတဲ့ ဇနီးသည်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၀မှာတော့ မိသားစုက စွန့်ပစ်လိုက်လို့ သွားစရာနေရာမရှိတော့တဲ့ victim (သားကောင်) အမျိုးသမီး ၁၅ယောက်ဟာ Umoja ရွာလေးကို အတူတူ ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အစကတော့ ၁၅ယောက်ပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းUmoja ဟာ မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ သားကောင်တွေ၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသူတွေ၊ အင်မတန်ရက်စက်တဲ့ မိန်းမကိုယ်အင်္ဂါ လှီးဖြတ်သော ဓလေ့(FGM)ကို ကြောက်လို့ ရှောင်ပြေးလာသူတွေ၊ အလိုမတူဘဲ အိမ်ထောင်ပြုရခြင်းကို ထွက်ပြေးလာကြသူ မိန်းကလေးတွေ ရဲ့ ခိုလှုံရာ နေရာလေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Umoja ရွာလေးဟာ သာမန်ရွာလေးတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ယောကျာ်းတွေ အကြမ်းဖက်တာခံရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုတဲ့၊ ဘေးကင်းအောင် စောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
တစ်ချိန်တုန်းက အမျိုးသားတွေဟာ Umoji ရွာလေးကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာမို့ Umoja ရွာလေးကို ဆူးပင်တွေ၊ ဆူးချွန်ပါတဲ့ ခြံစည်းရိုးတွေ သုံးပြီး ပြင်ပအန္တရာယ်ကနေ ကာရန်ထားပါတယ်။ ဝင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့သူရှိရင်တော့ ချက်ချင်းရဲတိုင်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စွာ သီဆို ကခုန်နေကြ တဲ့ သူတို့
Umoji အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့ ဘဝက ဘယ်လိုရှိလဲ?
သူတို့တွေဟာ ညီအစ်မ စိတ်ဓာတ်နဲ့ နေထိုင်ကြပြီး အကြမ်းဖက်မှုရန်ကနေ လွတ်ကင်းသွားကြပြီမို့ သူတို့ဘဝက အေးချမ်းလှပါတယ်။ နေ့ဘက်ဆို စကားဖောင်ဖွဲ့ကြရင်း ရောင်းချဖို့ ကျောက်ပုတီးလေးတွေ ထိုင်သီနေတတ်ပြီး ညနေဘက်ဆို ရိုးရာအကတွေ၊ သီချင်းတွေ ဆိုပြီး မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကနေတတ်ကြပါတယ်။
Related Article >>> သမိုင်းထဲက အာဂအမျိုးသမီးတွေအကြောင်း ယောင်းတို့ ဘယ်လောက်သိလဲ?
ရဲရင့်တဲ့ Umoja အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကို ကမ္ဘာကကြားသိသွားတာမို့ ခုဆို tourist (ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား) တွေ အများအပြား လာလည်ကြပြီး အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ ရောင်စုံကျောက်ပုတီးတွေနဲ့ အခြားရိုးရာ လက်မှုပစ္စည်းတွေကို အများအပြားရောင်းချနေရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Umoja ရွာလေးဟာ ဆာဖာရီကိုလာလည်တဲ့ Foreigner (နိုင်ငံခြားသား) တွေကိုလည်း Homestay serviceပေးပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းက သူတို့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးသူတွေ၊ စာနာသနားသူတွေဆီကလည်း ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကိုရရှိပါတယ်။
တစ်ချိန်တုန်းကတော့ အမျိုးသားတွေဟာ ဒီအမျိုးသမီးသီးသန့်ရွာလေးရဲ့ စီးပွားရေး ကျဆင်းအောင် စင်ပြိုင်စီးပွားရေးတွေလုပ်ခဲ့သလို touristတွေ မသွားအောင်လည်း အမျိုးမျိုးကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားကို နတ်စောင့်တယ်လို့ ဆိုရမလား… နောက်ဆုံးမှာ အမျိုးသမီးတွေကပဲ အနိုင်ရပြီး သူတို့ကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ရွာသားတွေရဲ့ မြေကိုပါ ဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Umoja က အမျိုးသမီးတွေဟာ ရောင်းရငွေတွေကို အမျိုးသမီးရွာသူကြီးဆီ အပ်နှံကြပြီး ရွာသူကြီးကနေ မိသားစုတစုမှာ ရှိတဲ့ကလေး အရေအတွက်အလိုက် အစားအစာတွေ ခွဲဝေပေးပါတယ်။
Umoja က အမျိုးသမီးတွေဟာ ကျား၊မ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို နှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းကို ဆန့်ကျင်သူတွေဖြစ်ကြပြီး အမျိူးသမီးတွေကို စွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကို ပညာသင်ခွင့်မပေးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကြီးစိုးတဲ့ ဒေသမှာ Umoja က အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကတော့ ကျောင်းတက်ပြီး ပညာ သင်ယူနေကြပါပြီ။
Umoja မှာ အသက်၃နှစ်တည်းက နေထိုင်လာပြီး ခုဆို ၁၈နှစ်အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ Learpoora ကတော့ ဆယ်တန်းတောင် ရောက်နေပြီမို့ တစ်ရွာလုံးရဲ့ Role model ပါပဲတဲ့။ သူ(မ)ဟာ အနာဂတ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုလိုပြီး ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်ချင်ပါတယ်တဲ့။
အက်ဒ်မင်ကတော့ အခွင့်အခါကြုံရင် အေးချမ်းလှတဲ့ ဒီရွာလေးကို သွားလည်ချင်မိပါရဲ့…
Reference links: cnn guardian
ဒီမှာလညျး အဲဒီလို ရှာလေးတှရှေိရငျ အကောငျးသား…
အခုတလော အိမျတှငျးအကွမျးဖကျမှုတှေ၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာစျောကားမှုတှကေို မွငျရတာ စိတျမခမျြးသာစရာပါပဲ။ တကယျတော့ဒီပွဿနာဟာ မွနျမာနိုငျငံတဈခုတညျးသာ မဟုတျဘဲ နိုငျငံအမြားစုက လူ့အဖှဲ့အစညျးတှမှော အမွဈတှယျနတေဲ့ ပွဿနာပါ။
ကငျညာနိုငျငံမှာဆိုလညျး လိငျအကွမျးဖကျမှုကို ဦးတညျနတေဲ့ ရိုးရာအယူအဆတခြို့ နဲ့ ဖိုဝါဒီ အားကောငျးမှုကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှေ နှိပျစကျခံရတဲ့ ပွဿနာသိပျကွီးပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Samburu လို နရောမြိုးပေါ့။
ဒါကွောငျ့ Samburu က အမြိုးသမီးတှဟော ဒီပွသာနာကို သူတို့နညျး သူတို့ဟနျနဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ ထူးခွားတဲ့အရာတဈခုကို ဖနျတီးခဲ့ကွပါတယျ။ အဲဒါကတော့ မိနျးမတှပေဲ သီးသနျ့နထေိုငျအုပျခြုပျနထေိုငျပွီး ယောကျြားတှေ အဝငျမခံတဲ့ ရှာငယျလေးကို တညျထောငျလိုကျခွငျးပါပဲ။
ဒီထူးခွားတဲ့ ရှာလေးနာမညျက Umoja လို့ ချေါပွီး Samburu စီရငျစု၊ ကငျညာမှာရှိပါတယျ။ ဒီနရောမှာအမြိုးသားတှမေရှိဘဲ ဘယျလိုနထေိုငျမှာလဲ ဒီမိနျးမတှကေကော အိမျထောငျမပွု တော့ဘူးလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှပေျေါလာကွပါတယျ။ အဲဒီမေးခှနျးတှကေို ဖွဖေို့ဆိုရငျတော့ ရှာလေးပျေါပေါကျလာပုံကနေ စပွောရပါလိမျ့မယျ။
၁၉၉၀ကာလတှမှော အင်ျဂလိပျစဈသားတှေ မုဒိနျးကငျြ့တာ ခံရတဲ့ ကငျညာအမြိုးသမီးအရအေတှကျက ထောငျနဲ့ခြီ ရှိပါတယျ။ သားကောငျဖွဈခဲ့ရပမေဲ့ သတ်တိရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော မုဒိနျးမှုကို တရားရုံးမှာ တိုငျတနျးခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တရားမြှတမှုကို မရရှိခဲ့ပါဘူး။ မုဒိနျးကငျြ့ခံရတာဟာ မိသားစုကို အရှကျရစတေယျဆိုပွီး လငျသားတှရေဲ့ နှိပျစကျရိုကျနှကျတာ၊ စှနျ့ပဈတာကို သာ ခံခဲ့ရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Rebecca Lulusoli နဲ့ တခွား victimအမြိုးသမီးတှဟော ဒီရှာလေးကို ဝိုငျးဝနျးတညျကွဖို့ အကွံရလာခဲ့ပါတယျ။ Rebecca ဟာ လိငျအကွမျးဖကျမှုကို ထုတျပွောမိလို့ လူတဈစုရဲ့ ရကျရကျစကျစကျရိုကျတာခံရတဲ့ ဇနီးသညျတဈဦးဖွဈပါတယျ။
၁၉၉၀မှာတော့ မိသားစုက စှနျ့ပဈလိုကျလို့ သှားစရာနရောမရှိတော့တဲ့ victim (သားကောငျ) အမြိုးသမီး ၁၅ယောကျဟာ Umoja ရှာလေးကို အတူတူ ထူထောငျခဲ့ပါတယျ။ အစကတော့ ၁၅ယောကျပမေဲ့ တဖွညျးဖွညျးမြားလာခဲ့ပါတယျ။
နောကျပိုငျးUmoja ဟာ မုဒိနျးကငျြ့ခံရတဲ့ သားကောငျတှေ၊ အိမျတှငျးအကွမျးဖကျခံရသူတှေ၊ အငျမတနျရကျစကျတဲ့ မိနျးမကိုယျအင်ျဂါ လှီးဖွတျသော ဓလေ့(FGM)ကို ကွောကျလို့ ရှောငျပွေးလာသူတှေ၊ အလိုမတူဘဲ အိမျထောငျပွုရခွငျးကို ထှကျပွေးလာကွသူ မိနျးကလေးတှေ ရဲ့ ခိုလှုံရာ နရောလေး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ Umoja ရှာလေးဟာ သာမနျရှာလေးတဈခု မဟုတျပါဘူး။ယောကျြားတှေ အကွမျးဖကျတာခံရတဲ့ အမြိုးသမီးလေးတှကေို နှေးထှေးစှာကွိုဆိုတဲ့၊ ဘေးကငျးအောငျ စောငျ့ရှောကျပေးထားတဲ့နရောတဈခုလို့ သတျမှတျရမှာပါ။
တဈခြိနျတုနျးက အမြိုးသားတှဟော Umoji ရှာလေးကို တိုကျခိုကျဖကျြဆီးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ကွတာမို့ Umoja ရှာလေးကို ဆူးပငျတှေ၊ ဆူးခြှနျပါတဲ့ ခွံစညျးရိုးတှေ သုံးပွီး ပွငျပအန်တရာယျကနေ ကာရနျထားပါတယျ။ ဝငျရောကျဖို့ ကွိုးစားတဲ့သူရှိရငျတော့ ခကျြခငျြးရဲတိုငျခံရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပြျောရှငျစှာ သီဆို ကခုနျနကွေ တဲ့ သူတို့
Umoji အမြိုးသမီးတှေ ရဲ့ ဘဝက ဘယျလိုရှိလဲ?
သူတို့တှဟော ညီအဈမ စိတျဓာတျနဲ့ နထေိုငျကွပွီး အကွမျးဖကျမှုရနျကနေ လှတျကငျးသှားကွပွီမို့ သူတို့ဘဝက အေးခမျြးလှပါတယျ။ နဘေ့ကျဆို စကားဖောငျဖှဲ့ကွရငျး ရောငျးခဖြို့ ကြောကျပုတီးလေးတှေ ထိုငျသီနတေတျပွီး ညနဘေကျဆို ရိုးရာအကတှေ၊ သီခငျြးတှေ ဆိုပွီး မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျကနတေတျကွပါတယျ။
Related Article >>> သမိုငျးထဲက အာဂအမြိုးသမီးတှအေကွောငျး ယောငျးတို့ ဘယျလောကျသိလဲ?
ရဲရငျ့တဲ့ Umoja အမြိုးသမီးတှအေကွောငျးကို ကမ်ဘာကကွားသိသှားတာမို့ ခုဆို tourist (ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှား) တှေ အမြားအပွား လာလညျကွပွီး အမြိုးသမီးတှေ ကိုယျတိုငျလုပျတဲ့ ရောငျစုံကြောကျပုတီးတှနေဲ့ အခွားရိုးရာ လကျမှုပစ်စညျးတှကေို အမြားအပွားရောငျးခနြရေပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ Umoja ရှာလေးဟာ ဆာဖာရီကိုလာလညျတဲ့ Foreigner (နိုငျငံခွားသား) တှကေိုလညျး Homestay serviceပေးပါသေးတယျ။ နောကျပွီး ကမ်ဘာတဝှမျးက သူတို့အတှကျ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးသူတှေ၊ စာနာသနားသူတှဆေီကလညျး ထောကျပံ့လှူဒါနျးမှုတှကေိုရရှိပါတယျ။
တဈခြိနျတုနျးကတော့ အမြိုးသားတှဟော ဒီအမြိုးသမီးသီးသနျ့ရှာလေးရဲ့ စီးပှားရေး ကဆြငျးအောငျ စငျပွိုငျစီးပှားရေးတှလေုပျခဲ့သလို touristတှေ မသှားအောငျလညျး အမြိုးမြိုးကွံစညျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တရားကို နတျစောငျ့တယျလို့ ဆိုရမလား… နောကျဆုံးမှာ အမြိုးသမီးတှကေပဲ အနိုငျရပွီး သူတို့ကို ဒုက်ခပေးနတေဲ့ရှာသားတှရေဲ့ မွကေိုပါ ဝယျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Umoja က အမြိုးသမီးတှဟော ရောငျးရငှတှေကေို အမြိုးသမီးရှာသူကွီးဆီ အပျနှံကွပွီး ရှာသူကွီးကနေ မိသားစုတစုမှာ ရှိတဲ့ကလေး အရအေတှကျအလိုကျ အစားအစာတှေ ခှဲဝပေေးပါတယျ။
Umoja က အမြိုးသမီးတှဟော ကြား၊မ ခှဲခွားဆကျဆံမှုနဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို နှိမျ့ခဆြကျဆံခွငျးကို ဆနျ့ကငျြသူတှဖွေဈကွပွီး အမြိူးသမီးတှကေို စှမျးအားမွှငျ့တငျပေးဖို့ ကွိုးစားနကွေသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး အမြိုးသမီးတှကေို ပညာသငျခှငျ့မပေးတဲ့ ယဉျကြေးမှုကွီးစိုးတဲ့ ဒသေမှာ Umoja က အမြိုးသမီးငယျလေးတှကေတော့ ကြောငျးတကျပွီး ပညာ သငျယူနကွေပါပွီ။
Umoja မှာ အသကျ၃နှဈတညျးက နထေိုငျလာပွီး ခုဆို ၁၈နှဈအရှယျရောကျနပွေီဖွဈတဲ့ Learpoora ကတော့ ဆယျတနျးတောငျ ရောကျနပွေီမို့ တဈရှာလုံးရဲ့ Role model ပါပဲတဲ့။ သူ(မ)ဟာ အနာဂတျမှာ အိမျထောငျပွုလိုပွီး ကြောငျးဆရာမ ဖွဈခငျြပါတယျတဲ့။
အကျဒျမငျကတော့ အခှငျ့အခါကွုံရငျ အေးခမျြးလှတဲ့ ဒီရှာလေးကို သှားလညျခငျြမိပါရဲ့…
Tags: News, Rule, victim, Village, women, Women News